Faah-faahin ku saabsan qaraxii ismiidaaminta ee ka dhacay Xerada Turkiga ee Muqdisho & Taliyaha … | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin ku saabsan qaraxii ismiidaaminta ee ka dhacay Xerada Turkiga ee Muqdisho...
Faah-faahin ku saabsan qaraxii ismiidaaminta ee ka dhacay Xerada Turkiga ee Muqdisho & Taliyaha …
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliska Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa faah-faahin ka bixiyay Qarax uu fuliyay ruux naftii halige ah, kaasi oo ka dhacay afaafka hore ee Xerada Turksom ee ku taallo wadada Jazeera ee duleedka Koonfureed Magaalada Muqdisho.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka, Odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in Ciidanka Amniga ay toogteen nin doonaayay in uu isku qarxiyo dhallinyaro ku biirayso ciidamada xoogga oo tababar loo furayo.
Taliyaha ayaa ku sheegay Khasaaraha ka dhashay Qaraxa laba qof oo uu saddex ku yahay ninka la toogtay in ay ku dhinteen, waxaana uu sheegay in ay jiraan dhaawacyo ka dhashay Qaraxa sidoo kale.
“Qof xiran walxaha qarxa ayaa isku dayay in uu soo dhexgalo dhallinyaro Jaamacaddaha kasoo baxay oo doonayay in ay ciidamada kusoo biiraan, balse ciidamada ayaa ka shakiyay iyagoo toogtay ka hor inta aanu soo dhexgalin galin ardayda ” ayuu yiri Gen. Odawaa.
Muddooyinkii dambe, taliska Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ayaa wuxuu qorayay dhallinyaro kala duwan oo ah kuwa Jaamacadaha ka baxay si ay tababar u qaataan, ugana mid noqdaan Saraakiisha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya.
Taliska Ciidanka Xoogga